Harkwood Services Ltd Sync-One2 v2 - MediaLight Bias Mwenje
musha Harkwood Services Ltd Kubvumirana-One2 v2
Mutengo wepakutanga $450.00 - Mutengo wepakutanga $450.00
Mutengo wanhasi $450.00
Yakarurama AV Kubvumirana kuyerwa kwakaitwa nyore
Sync-One2 inoyera nenzira yekuteerera vhidhiyo kunonoka / zvikanganiso kukubatsira iwe nekukurumidza kumisikidza yako system. Kuedza kutarisa chero sisitimu nemaoko kutambisa nguva uye kuvimba nekufungidzira nekuyedza uye kukanganisa kugadzirisa. Kushandisa Sync-One2 kunokurumidza uye kwakarurama. Tsanangudzo yematambudziko akajairika anogona kuwanikwa mu FAQ.
Dzoka dzakadzorerwa (dzakavhurwa kana kuvhurwa) dzinoiswa pasi pechibvumirano chemakumi maviri neshanu% yekubhadharisa mari. Hapana kudzoreredzwa kwemauniti-akakuvadzwa zvikamu. Iyo MediaLight Bias Lighting waranti haina kuwedzera kune chero Sync-One2 kana chero zvimwe zvisiri-MediaLight zvine zvigadzirwa.
Post Production kana firimu yekugadzirisa ipapo sync yakakosha kune yekugadzira maitiro
Nyanzvi AV chengetedza masystem ako akaiswa nemazvo kune vako vatengi
Dhijitari Cinema paunenge uchiisa kana kutarisa bhaisikopo kuona kuti sync iri chokwadi inogadzira vatengi vanofara
Ipa Sisitimu Calibration masevhisi wobva wapedzisa basa nekuona kuti sync yakarongedzwa futi
Kana iwe uchibatanidzwa mune chero chepamusoro apa Sync-One2 iri ari chishandiso chaunoda.
Kushandisa Sync-One2 kunobvisa fungidziro uye kunochengetedza nguva nekuyera nenzira kwayo AV sync kukanganisa. Kuratidza kukanganisa mumamiriseekondi uye / kana mafuremu, uye kana odhiyo ichitungamira kana kukosora zvine chekuita nevhidhiyo, zvese munguva chaiyo. Nekuverenga uku unogona kugadzirisa chaiko kune yako system. Kwete kufungidzira, hapana nguva yakatambiswa, Sync-One2 inoita kuti zvive nyore. Sisitimu inogona kuongororwa uye kugadziriswa mumaminetsi mashoma ekuchengetedza nguva nemari.
Inoshandiswa nehunyanzvi kutenderera pasirese seye chishandiso chereferenzi muPost Production, Dhijitari Cinema, Nyanzvi sisitimu Calibrators, TV network, uye vazhinji vazhinji vanovimba neiyo chaiyo AV sync.
Microphone yemukati yekuteerera kurodha
Nyowani muv2 3.5mm stereo (pasi yakasanganiswa mono mukati) odhiyo jack yekubatanidza kune headphone kana mutsetse kunze seyakajeka odhiyo feed. Inotsigira kusvika ku3v RMS (9v peak kusvika pakakwirira) chiyero chakakura chemutsara.
Nyowani muv2 Kunze kwekuteerera kwekuteerera kuri otomatiki, asi kunogona kukundwa kuburikidza nesarudzo yemenyu
Kuyerwa kwekuteerera kunoonekwa kunonoka kusvika ± 750 milliseconds
Chiratidziro chakatenderedzwa kusvika padyo 1 millisecond kana 1 / 100th yefuremu, resolution yemukati yekumisidzana ye0.05 millisecond pakati pechiedza uye kurira kwemhepo.
Kuzvidzora pachako kunochinja kune ambient ruzha uye mwenje, kusanganisira fluorescent / LED mwenje kudzima
Otomatiki maikorofoni inowana kugadziriswa panguva yekugadzirisa maitiro Yakagadziridzwa mu v2
Adjustable odhiyo inokonzeresa chikamu
Adjustable video trigger level (default ndeyekunzwisisa kukuru)
Nyowani muv2 Adjustable Mask Nguva (iyo shoma nguva pamberi paSync-One2 kudzokorodza maoko kuitira kuverenga kunotevera), kubatsira nezviyero munzvimbo dzine nguva refu yekudzokorora.
Zviyero (H x W x D), 144mm x 90mm x 30mm (5.6 "x 3.5" x 1.2 ")
165g (5.8oz) kusanganisa mabhatiri
16 x 2 OLED kuratidzwa kwekutarisa kuri nyore, kupindura nekukurumidza, uye pasi simba kwesimba Yakagadziridzwa muv2, ikozvino yakajeka uye yebhuruu
Kushanda kwekushanda kubva pa5 kusvika 50 Celsius (41 kusvika 122 Fahrenheit)
Nyowani muv2 Sisitimu firmware inokwidziridzwa kuti ikwanise kukwidziridzwa kwezvinhu zvitsva kana bespoke tsika zvinodiwa
Nyowani muv2 Iko kugona kwekuwedzera kwetsika kupaza meseji pakutanga
Nyowani muv2 Iko kugona kuodha Sync-One2 v2 neinogara ichipaza mameseji meseji, saka zviri nyore kumakambani kuwedzera chiratidzo kana bespoke chitupa
2 x AA (LR6) mabhatiri, rechargeable AA mabhatiri akanaka futi
Reverse bhatiri kuchengetedza
Hupenyu hwebhatiri kubva pamatanho emabhatiri eAA ari maawa makumi mashanu ekuenderera mberi kwekushanda
Iyo tudiki yazvino isingasviki 0.1 µA inoshandiswa kana yadzimwa. Kunyangwe zvakadaro kana isiri kushandiswa kwechinguvana zvinogara zvakanaka kubvisa mabhatiri
Yakadzika bhatiri chiratidzo uye auto kudzima kana mabhatiri ave akaderera zvakanyanya kuti achengetedze kunyatso
Nyowani muv2 Inogona kupihwa simba kuburikidza ne USB Mini-B chiteshi
Nyowani muv2 Kugadzira dhata uye API interface
Via iyo USB Mini-B chiteshi nguva chaiyo kutema kuverenga
An API interface yekugonesa kure kure kweSync-One2 v2 kugadzirisa otomatiki kuyedza / gadziriso yesystem, kana kuunganidza data rehurongwa hwekuteerera system
Rimwe bhuku rine mirayiro yeAPI inowanikwa
kubatsira kutsvaga mukati mewebsite yedu: sync, sync imwe, snyc imwe,
5.0 Kubva pane 1 Ongororo
zvakanaka zvakanaka zvakanaka